ERP Myanmar Manufacturing System | Global Connect Asia : ERP | Web Builder | GPS | Judgify | Gevme | Software Solutions Company in Myanmar
Home / Blog / Digital Marketing Insights / ERP Myanmar Manufacturing System
30 August 2018 GCA Admin news
Manufacturing ဆိုတာ ဘာလဲ? Odoo ERP Myanmar Manufacturing System
Manufacturing ဆိုတာ ကုန်ကြမ်း (Raw Materials) ကနေ ကုန်ချော (Finished Goods) အထိ စက်ပစည်း အဆင့်ဆင့်၊ Process အဆင့်ဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်းပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Manufacturingဆိုတာ ထုတ်ကုန်အစမှအဆုံးတိုင် Processes တွေအဆင့်ဆင့်အကုန်လုံးကို value-added ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Manufactruing ကဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်လို manage လုပ်သလဲ ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်လာပြန်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျန်တော်တို့ Odoo ERP Myanmar ထဲက Odoo Manufacturing Myanmar အကြောင်း ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Manufacturing တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Excel တွေနဲ့ ပဲ အသုံးပြုနေကြတာများတယ်၊ System သုံးတဲ့သူ အရမ်းနည်းတယ်။
ဘာလို့ နည်းလဲ၊ နည်းပညာနဲ့ အလှမ်းဝေးတာက တစ်ကြောင်း၊ System သုံးရခြင်းကြောင့် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို မသိတာကတစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များနဲ့ မသုံးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Manufacturing မှာဆိုရင် ပထမဦးဆုံး Customer ရှိမယ် ၊ Customer ကနေ Sale Order တင်မယ်၊ အဲ့ဒီမှာတစ်ချို့ Manufacturing တွေက BOA ကနေ ဒီလောက်ထုတ်မယ် ဆိုပြီး Production Manager ကို command ပေးတယ်၊ အဲ့ဒီအခါကျမှ Production Manager က ထုတ်လုပ်ပေးရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကြတော့ Sale Order ပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်ကြတယ် ။ တစ်ချို့ ကတော့ ကြိုထုတ်ထားတယ် ၊ တစ်ချို့ ကတော့ Order မရှိဘဲ ကြိုမထုတ်ရဲဘူး အရှုံးပေါ်မှာစိုးလို့၊ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Odoo ERP Myanmar ထဲမှ Manufacturing ရဲ့ အားသာချက်က အဲ့ဒီနေရာမှာ နှစ်မျိုးလုပ်လို့ ရတယ်။
#ပထမတစ်ချက်က Sale Order ကနေ Production Order ကိုပြောင်းလို့ ရတယ်။
#နောက်တစ်ချက်က Sale Order မဟုတ်ဘဲ Production Manager က သူဟာသူ Work Order ကိုထုတ်လို့ ရပါတယ်။ ရလာတဲ့ Sale Order ကို Production Manager ကလက်ခံပြီး Production Order (PO) အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ BOM (Base of Materials) တွေ၊ Man Power တွေ၊ Machine Route တွေကို စီမံခန့် ခွဲပြီး schedule time ဆွဲတယ်။ Inventory တွေမှာ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်ချင်တိုင်း ထုတ်မရဘူး ၊ Machine Route တွေအားလား? Route ဘယ်နှစ်ခုသုံးမလဲ? ဒါမှမဟုတ် Employee တွေရဲ့ တစ်နေ အလုပ်ချိန်၊ ဒါတွေကို တွက်ချက်ပြီးမှ အလုပ်စရတယ်၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ Odoo ERP Manufacturing Myanmar ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MRP (Material Resources Planning) လို့ ခေါ်တယ် ။
ထွက်လာတဲ့ ကုန်ချောတွေကို customer order အတိုင်း ပါကင်ထုတ်မယ်၊ နောက်ပြီး Warehouse ထဲထည့်၊ Delivery ပို့ တယ် ။ ဒါဟာ Maunufacturing ရဲ့ Overflow ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Manufacturing မှာ အဓိကအရေးပါတာက BOM (Base of Materials) အတွက် Formula ပဲ ။ ဘာလို့ အရေးပါလဲဆိုတော့ ဥပမာ Shirt တွေထုတ်မယ်ဆိုပါတော့၊ ပိတ်စက ဘယ်လောက် ၊ ကြယ်သီးက ဘယ်လောက်၊ ဒါတွေအကုန် တွက်ချက်ပြီးမှ
ထုတ်ရတာပဲမလား၊ ဆိုတော့ အလေအလွင့်တွေ၊ ပိုတာတွေ မဖြစ်စေဖို့BOM ကိုသုံးပေးရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းက BOM ကိုကြိုက်သလို Create လုပ်နိုင်တယ်၊ Edit လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ Odoo ERP Manufacturing Myanmar ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။
Features ပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပီး MRP (Material Resources Planning) ရဲ့ Features တွေ အကြောင်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်၊ Features တွေထဲကမှ Master Data တွေအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
သူကတော့ Product A ကိုထုတ်မယ်၊ နောက် Product B ကိုထုတ်မယ် ဒါတွေက Semi Finished Goods လို့ ခေါ်ပါတယ် ၊ နောက်ဆုံး A+B = Product C လို့ ခေါ်တဲ့ Final Goods ထွက်လာပါတယ် ။ ဒီ Process တွေအားလုံးကို လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ တစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်စေ၊ Sizeအမျိုးမျိုး၊ Colorအမျိုးမျိုးကို အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးပဲဖြစ်စေ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ထုတ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး Master Data ကို ဆောက်ပေးရမယ်။ Planning ဆိုတာလည်း ရှိကိုရှိရမယ်။ Sale Order က ဘယ်လောက်မှာတယ်ဆိုတာ မှန်းဆပြီးမှ ထုတ်လုပ်ကြတာပဲမလား? ဆိုတော့ MRP Planning ရှိမှ Waste ဆိုတာလည်း ထွက်လာမယ်။ Report တွေပြန်ကြည့်လို့ ရမယ်။ ဒါဟာ Manufacturing မှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ။
Product တစ်ခုထုတ်တဲ့အခါ Serial Number တွေထည့်ပေးလို့ ရတယ်။ ကောင်းကျိုးကတော့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Date ကအစ Check In လိုက်လို့ ရတယ်။ Every Manufacturing တိုင်းမှာဆိုရင် Cost ကအရမ်းစကားပြောပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ MRP planning က Cost တွေကို ကြိုက်သလို Plan ချနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ Raw Material တွေ၊ Employees၊ Tools၊ မီတာခ တွေအတွက် ကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ လူကြီးမင်းရဲ့Manufacturing က အရမ်းကြီးနေတဲ့အခါ Waste တွေက ပျောက်သွားကြတယ်၊ ဒါတွေကို သေချာ Manage လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို Production Costs Analysis လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့Odoo Manufacturing ဟာ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ Inventory အတွက် အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေကိုပေးဖို့ စောင့်မျှော်နေပါပြီ…
Odoo ERP Myanmar
Odoo ERP Manufacturing Myanmar
Odoo ERP Myanmar Manufacturing System
Manufacturing System Myanmar
This is gca admin.
Email: hninzar@global-connect.asia Webiste: www.gca.com.mm